एकैसाथ एनआईसी एशिया बैंकका १४ शाखा र एक एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन
ARCHIVE, CORPORATE » एकैसाथ एनआईसी एशिया बैंकका १४ शाखा र एक एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन
काठमाडौँ - शाखा तथा एटिएम सञ्जालको आधारमा देशको सबैभन्दा ठूलो एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो लुम्बिनी क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत खोलिएका १४ वटा शाखा र एउटा एक्सटेन्सन काउन्टरको एकैसाथ उद्घाटन गरेको छ । विहीबार (असार १४ गते) एकैसाथ सबै शाखा र एक्सटेन्सन काउन्टरको विधिवत उद्घाटन गरिएको हो ।
एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर २२४ शाखा कार्यालयहरु, २१८ एटिएम, १४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं ११ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकको वासलातको आकार रू. १७४ अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने कुल निक्षेप करिब रू. १४९ अर्ब पुगि निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकहरुमध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक तथा कुल कर्जा करिब रू. ११९ अर्ब सहित निजी क्षेत्रका बैंकहरु मध्ये दोस्रो ठूलो बैंकको रुपमा बैंकले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भइसकेको छ ।